TVN (အာရှ) - ဝီကီပီးဒီးယား
အောက်တိုဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၉ (၂၀၀၉-၁၀-၂၆)
CJ E&M from Singapore only (68.81%)
21st Century Fox& Fox Networks Group from Malaysia with tvN Movies HD asia only (31.19%)
Where fun takes off.
ကန်တုံစကား(ဟောင်ကောင် နှင့် မလေးရှား ၌သာ)
မလေးဘာသာ (မလေးရှား၊စင်ကာပူနှင့် အင်ဒိုနီးရှား)
Channel M (၂၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂-၃ ဇွန်လ ၂၀၁၆)
Channel 231 (tvN Movies HD) မကြာမီ
Dialog TV (သီရိလင်္ကာ)
Big TV (အင်ဒိုနီးရှား)
Channel 151 (tvN Movies HD) မကြာမီ
Channel 146 (tvN Movies HD) မကြာမီ
Channel 130 (tvN Movies HD) မကြာမီ
Sky Direct (ဖိလစ်ပိုင်)
StarHub TV (စင်ကာပူ)
First Media (အင်ဒိုနီးရှား)
Sky Cable / Destiny Cable (ဖိလစ်ပိုင်)
Parasat Cable TV (ဖိလစ်ပိုင်)
Cable TV Hong Kong (ဟောင်ကောင်)
Channel 208 (tvN Movies HD) မကြာမီ
Channel 134 (tvN Movies HD) မကြာမီ
CHT MOD (HD Version) (ထိုင်ဝမ်)
Channel 634 (tvN Movies HD) မကြာမီ
Unifi TV (မလေးရှား)
Singtel TV (စင်ကာပူ)
Channel 431 (tvN Movies HD) မကြာမီ
Channel 505 (HDTV )
Channel 205 (tvN Movies HD) မကြာမီ
tvN (အာရှ) ရုပ်သံလိုင်း (ယခင် Channel M ၂၀၁၂ခုနှစ် မှ ၂၀၁၆ခုနှစ်ထိ) သည် CJ E&M ၏ စီမံခန့်ခွဲမှု အောက်တွင် ကိုရီးယား ဘာသာစကား ဖြင့် ထုတ်လွှင့်နေသော ဖျော်ဖြေရေး ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ အဆိုပါရုပ်သံလိုင်းသည် CJ E&M( tvN (တောင်ကိုရီးယား)၊Mnet၊OCN၊အစရှိသည့်) တို့မှစီစဉ်ရိုက်ကူးထားသော တောင်ကိုရီးယား ရုပ်သံအစီအစဉ်များကို ထုတ်လွှင့်ပြသနေသည်။အဆိုပါ ရုပ်သံလိုင်းသည် ABS-CBN Corporation မှ ဖြန့်ချိထားသော ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ အပ ကျန်နိုင်ငံများကို Fox Networks Group မှ ဖြန့်ချိထားသည်။
၂၀၀၉ အောက်တိုဘာလ ၂၆ရက်နေ့ တွင် tvN ဟူ​​သော အမည်ဖြင့် စတင် ဖြန့်ချိ ခဲ့ပြီနောက် ၂၀၁၂ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ရက် တွင် Channel M ဟူသော အမည် သို့ ပြောင်းလဲ ခဲ့သည်။ 
၂၀၁၆ ဇွန်လ ၃ရက်နေ့ ညနေပိုင်း တွင် ယခင် နာမည်ဖြစ်သော tvN သို့ ပြန်လည် သတ်မှတ် ခဲ့သည်။
TVN Movies HD ရုပ်သံလိုင်းသည် tvN ရုပ်သံလိုင်း၏ ညီအစ်မရုပ်သံလိုင်း တစ်ခု ဖြစ်ပြီး တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ ရုပ်ရှင်များ ကို ထုတ်လွှင့်ပြသနေသောရုပ်သံလိုင်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါရုပ်သံလိုင်း အား ၂၀၁၇ မတ်လ တွင် စင်ကာပူနိုင်ငံ ၊ ဟောင်ကောင် နှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ တို့တွင် စတင် ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ ယခုအခါတွင် အဆိုပါရုပ်သံလိုင်းအား Singtel TV ရုပ်သံလိုင်း နံပါတ် (၄၃၁) မှတစ်ဆင့် မလေးရှားနိုင်ငံ ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ ၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ၊ ဟောင်ကောင် ၊ ထိုင်ဝမ် နှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံ တို့၌ ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
၂၀၁၇ ဇွန်လ တွင် tvBlue အား VTC5 (ခေါ်) VBC ၌ စတင် ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင် tvN (အာရှ) ရုပ်သံလိုင်း အား tvN ( စင်ကာပူ) ပုံစံဖြင့် မူရင်းထုတ်လွှင့်မှုပုံစံမှ ကွဲပြားလျက် ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
၂၀၁၇ ဩဂုတ်လ ၁၃ရက်နေ့ တွင် tvN(အာရှ)ရုပ်သံလိုင်းသည် စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ ထုတ်လွှင့်နေစဉ်အတွင်း မလေးရှား နှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ များအတွက် အသွင်ပုံစံ တစ်မျိုးဖြင့် ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ထို့အပြင် တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံမှ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲများဖြစ်သော Live Up to Your Name နှင့် Black ကို ၂၄နာရီ အတွင်း ပြသခဲ့သည်။
↑ TVN:Feature Channel retrieved via http://www.foxinternationalchannels.com 11-13-2010
↑ TVN Asia channel launched Archived 26 May 2013 at the Wayback Machine. retrieved via http://www.asiamediajournal.com/ 10-26-2009
↑ tvN Asia to Change to K-Culture Channel ′Channel M Asia′[လင့်ခ်သေ] Retrieved 2012-11-21
↑ tvN Asia Changes to Channel M Asia Retrieved 2012-11-21
↑ Channel M (2016-05-04)၊ tvN is COMING...၊ 2016-05-08 တွင် ပြန်စစ်ပြီး
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=TVN_(အာရှ)&oldid=638820" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၀၆:၅၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။